Entretien téléphonique entre François Hollande et Aung San Suu Kyi - (...) - La France en Birmanie
Accueil > Actualités > Actualité en France > Entretien téléphonique entre François Hollande et Aung San Suu Kyi - (...)
"Le Président de la République s’est entretenu ce matin avec Mme Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et Présidente de la Ligue nationale pour la démocratie.
Il s’est réjoui du bon déroulement de la campagne et des élections etafélicité Mme Aung San Suu Kyi pour son rôle déterminant dans les progrès de la démocratie en Birmanie qui doivent être poursuivis.
Le chef de l’Etatarappelé que la France restait très attentive au respect de la volonté du peuple birman, à l’apaisement des tensions politiques et religieuses et à la poursuite de la réconciliation nationale voulue par Mme Aung San Suu Kyi. Les engagements pris à cet égard doivent être respectés."
ယနေ့မနက်ပိုင်းတွင် ပြင်သစ်သမ္မတသည် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ် စကားပြောခဲ့ပါသည်။
ပြင်သစ်သမ္မတသည် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အပေါ် ဝမ်း မြောက်ပါကြောင်း နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုး လာစေရန် ခိုင်မာပြတ်သားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် စိတ်ဓါတ်ကို ချီးကျုးဂုဏ်ပြုခဲ့ ပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာလျှက် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး တင်းမာမှု့များလျှော့ကျလာစေရန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုလားသည့် ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ရမည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စရပ်များကို သတိကြီးစွာထားပြီး စောင့်ကြည့်နေပါကြောင်း နှင့် ထိုကိစ္စရပ်များအား ယုံကြည်စွဲမြဲစွာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလေး စားလိုက်နာရမည်ဖြစ် ပါကြောင်း ပြင်သစ်သမ္မတ မှထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
He welcomed the successful conduct of the campaign and of the elections and congratulated Mrs Aung San Suu Kyi for her decisive role in the progress of democracy in Myanmar, which must be pursued.
The President recalled that France was still paying close attention to the respect of the will of the people of Myanmar, to the easing of political and religious tensions and to the pursuit of national reconciliation as desired by Mrs Aung San Suu Kyi. The commitments made in this regard must be respected."